EPL: Man United oo guul wayn ka gaartay kooxda Sunderland ee uu watay tababarahoodii hore, iyadoo kulankan uu bandhig cajiib ah sameeyey Ibrahimovic… + SAWIRRO – Gool FM
(Manchester) 26 Dis 2016 – Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa guul wayn oo 3-1 ka gaartay naadiga Sunderland ee uu watay tababarahoodii hore ee David Moyes, iyadoo kulankan uu bandhig cajiib ah sameeyey Zlatan Ibrahimovic.
Goolka koowaad ee Man United ayaa yimid 39’daqiiqo qeybtii hore ee ciyaarta waxaana u dhaliyey difaacooda Daley Blind, kaddib baas isku dhufasho caawin ah oo uu ka helay Zlatan Ibrahimovic, sidaas ayaana lagu kala nastay qeybta hore ee ciyaarta kooxda Jose Mourinho oo kulanka ku hoggaaminaysa 1-0.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaata 82’daqiiqo Zlatan Ibrahimovic ayaa goolka labaad ee kulankan u dhaliyey kooxdiisa Man United kaddib caawin uu ka helay Paul Pogba, kulanka ayaana sidaas ku noqday 2-0 ay ku gacan sarreysay Man U.
Man United ayaa markale la timid goolka saddexaad ee ciyaarta waxaana kubbad uu dadab ka soo qaaday 86’daqiiqo Zlatan Ibrahimovic cirib ku dhaliyey Henrik Mkhitaryan oo kulankan bedel ku soo galay kulanka ayey Man United gacanta sare ku lahayd 3-0.
Intii lagu guda jiray daqiiqadihii dheeriga ahaa ee lagu kordhiyey ciyaarta Sunderland ayaa la timid hal gool, waxaana kubbad uu ka soo tuuray bannaanka xerada ganaaxa ka dhaliyey Man United Fabio Borini, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 3-1 ay ku adkaatay kooxda tababare Jose Mourinho ee Man United.
Zlatan Ibrahimovic ayaa bandhig cajiib ah sameeyey kulankan waxaana uu kaalin mug leh ka qaatay in garoonka Old Trafford lagu garaaco kooxda uu horkacayey tababarihii hore ee Man United David Moyes ee Sunderland, maxaa yelay goolna waa uu ka dhaliyey labada gool ee kalena isaga ayaa ku dhiibay.
Man United ayaa sidaas ku gaartay guusheedii afaraad oo xiriir ah horyaalka Premier League, waxaana hadda ay ku jirtaa kaalinta 6-aad ee kala sarreynta horyaalka Ingiriiska iyadoo leh 33-dhibcood 18 kulan oo ay ciyaartay.